ODNOKLASSNIKI ဖို့ရဲ့ LOGIN RECOVER လုပ်နည်း - အတန်းဖော် - 2019
Odnoklassniki ဖို့ရဲ့ login Restoring
သငျသညျအတနျးဖျောမှသင်၏ရဲ့ login မေ့လျော့ကြပြီလျှင်, သင်၏အစာမကျြနှာပျေါတှငျဝငျရောကျသင်တို့သည်လည်းအလုပ်မလုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်, အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဘာလို့လဲဆိုတော့သင် password ကို, ဒါပေမယ့်လည်းဝန်ဆောင်မှုအဘို့သင့်ထူးခြားတဲ့အမည်ဖြင့်သာလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, စကားဝှက်တစ်ခုဆင်တူရဲ့ login, သင်သည်မည်သည့်လေးနက်ပြဿနာများမပါဘဲပြန်လည်ရယူနိုင်ပါတယ်။
ရဲ့ login အရေးပါမှု Odnoklassniki
သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာ Friendster မှာသင့်အကောင့်ကိုဖန်တီးရန်အဘို့အအလို့ငှာ, သငျသညျလူမှုရေးကွန်ရက်အသုံးပြုသူများအနေဖြင့်တခြားအရာအဘယ်သူမျှမထူးခြားတဲ့ရဲ့ login, အတူတက်လာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင့်အကောင့်ကနေ password ကိုအတူတူအကောင့် password ကိုလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဝန်ဆောင်မှုကို login နဲ့ password ကို pair တစုံရိုက်ထည့်ရန်လိုအပ်သောခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Method ကို 1: အပို input ကိုရှေးခယျြစရာ
သငျသညျ Odnoklassniki မှာမှတျပုံတငျတဲ့အခါမှာသင်တယ်လီဖုန်းသို့မဟုတ် e-mail, ကနေတဆင့်သင့်ရဲ့အထောက်အထားသက်သေပြခဲ့ကြရသည်။ သင်သည်သင်၏ရဲ့ login မေ့လျော့ကြပြီဆိုပါက, သင်သည်သင်၏အဓိက ID ကိုမှတူသောအအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်ရာ, သင့်ကို e-mail ကို / ဖုန်းကိုသုံးနိုင်သည်။ ရုံထဲမှာ "ဝင်မည်" သင့်ရဲ့ e-mail, / ဖုန်းကိုရိုက်ထည့်ပါ။
သို့သော်ဤနည်းလမ်း (လူမှုရေးကွန်ရက် pair တစုံရဲ့ login နဲ့ password မမှန်ကန်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းမှားယွင်းမှုတစ်ခုပေးသည်) အလုပ်လုပ်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
Method ကို 2: စကားဝှက်ကို Restore
သင်သည်သင်၏ရဲ့ login နှင့် / သို့မဟုတ်စကားဝှက်ကိုမေ့လျော့ကြပြီဆိုပါကသင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်းကနေအခြားဒေတာများကိုသတိရလျှင်, သင်ထိုကဲ့သို့သောအကောင့်မှတ်ပုံတင်သောဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုအဖြစ်ပြုလုပ် restore လုပ်လို့ရပါတယ်။
ဘယ်မှာရဲ့ login form ကိုအဓိကစာမျက်နှာ, တွင်, စာသား link ကိုနေရာချထား "Password ကိုမေ့နေပါသလား"လယ်တို့၌ရသော password ကိုကျော်တွင်တည်ရှိသည်။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးမြင်ကွင်းထဲကိုဝင်ရောက်ဖို့အတော်ကြာရွေးချယ်စရာတင်ဆက်မယ့်စာမျက်နှာကိုသငျသညျကိုလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျ မှလွဲ. သူတို့ကိုမဆိုသုံးနိုငျ "ဝင်မည်"။ ဤညွှန်ကြားချက်ဥပမာဇာတ်လမ်းအပေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည် "ဖုန်း"။ ပြန်လည်နာလန်ထူနည်းလမ်းများ "တယ်လီဖုန်း" နှင့် "မေးလ်" တစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှအလွန်ဆင်တူ။
ရွေးချယ်ခြင်းပြီးနောက် "ဖုန်း" / "မေးလ်" သငျသညျအထူးအက္ခရာအကောင့်ရိုက်ထည့်ရန်လက်လှမ်းကုဒ်နှင့်တကွကြွလာဘယ်မှာသင်၏နံပါတ် / အီးမေးလ်, ရိုက်ထည့်တဲ့စာမကျြနှာသငျသညျကိုလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဒေတာဝင်ပြီးနောက်, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Send".
ဒီခြေလှမ်းမှာခလုတ်ကိုသုံးပါ, အချောကုဒ်အတည်ပြု "ကုဒ် Send".
အခုဆိုရင်အထူး box ထဲမှာ code ကိုရိုက်ထည့်ပါနဲ့ click နှိပ် "Confirm"။ အများအားဖြင့်က3မိနစ်အတွင်းမေးလ်သို့မဟုတ်ဖုန်းလာ။
သင်သည်သင်၏ username နှင့် password ကိုပြန်လည်နာလန်ထူဖို့လိုအပ်ကတည်းက, သူ့အကောင့်ထဲမှာ, သင်သည်ဤ parameter သည်ကိုတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်မလိုအပ်ပါကပြောင်းလဲပါ။
Odnoklassniki အတွက်အမည်အားပြောင်းလဲပစ်ရန်ကဘယ်လို: ဆက်ဖတ်ရန်
Method ကို 3: တယ်လီဖုန်းမှတဆင့်ရဲ့ login ဆယ်
သငျသညျအရေးတကြီးသင့်ဖုန်းမှအတန်းဖော်ထဲသို့မဝင်ရဖို့လိုအပ်ပါတယ်နှင့် အကယ်. သင်သည်သင်၏ရဲ့ login သတိရကြဘူး, ထို့နောက်သင်သည်မိုဘိုင်း application ကိုအတန်းဖော် အသုံးပြု. access ကိုပြန်လည်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။
login page ကိုတွင်, စာသား link ကိုအသုံးပြု "ငါမလာနိုင်သလား?".
ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေး၏ 2nd နည်းလမ်းနှင့်အတူတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်, အကောင်းဆုံးကိုသင်ကိုက်ညီသော option ကိုရွေးပါ။ ညွှန်ကြားချက်များသည်လည်း၏စံနမူနာအပေါ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည် "တယ်လီဖုန်း" နှင့် "မေးလ်".
ပုံပေါ်သောမျက်နှာပြင်, (ရှေးခယျြသောထို option ပေါ် မူတည်. ) သင့်ရဲ့ဖုန်း / e-mail, ရိုက်ထည့်ပါ။ ဒီစာမျက်နှာဝင်ရောက်ဖို့လိုအပ်ကြောင်းအထူးကုဒ်ရှိပါတယ်ရောက်လိမ့်မည်။ လာမယ့် screen ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့, ခလုတ်ကိုကိုသုံးပါ "ရှာရန်".
ဒီနေရာတွင်အခြေခံသင့်စာမျက်နှာအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်နှင့် code ကိုစလှေတျတျောကိုခံရပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာဖုန်းနံပါတ် / လိပ်စာတွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။ action ကိုအတည်ပြုဖို့, အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Send".
သငျသညျအကွောငျးကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်လာကြလိမ့်မည်သည့်ကုဒ်, ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသည်ရှိရာတစ်ဦးကပုံစံပေါ်လာလိမ့်မည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်ပါက3မိနစ်အထိနှောင့်နှေးစေခြင်းငှါ။ code ကိုရိုက်ထည့်ပါနှင့်သင့် input ကိုအတည်ပြုပါ။
သင်သည်သင်၏ရဲ့ login မေ့လျှင် Odnoklassniki အတွက် page ကိုဝင်ရောက်ခွင့်၏ပွနျလညျထူထောငျနှင့်အတူမည်သည့်အခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်သင့်ပါဘူး။ အဓိကအရာကိုသင်မှတ်ပုံတင်အကောင့်ခဲ့သည့်ထိုကဲ့သို့သောဖုန်းကိုအဖြစ်မဆိုအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို, သတိရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။